Enweghi ike ịgbanwe Radio (NAV1) na Air France Airbus 380
Enweghi ike ịgbanwe Radio (NAV1) na Air France Airbus 380 3 afọ 6 ọnwa gara aga #442
Agbalịwo m ihe niile, mana enweghị m ike ịgbanwe ugboro ugboro na redio (NAV1) na Air France Airbus 380. Enwere m amasị ụgbọ elu ahụ mana ọ nweghị uru ọ bụla ma ọ bụrụ na enweghị m ike ịgbanwe ugboro ugboro redio.
Kedu ihe bụ nzuzo? Biko nye aka.
Enweghi ike ịgbanwe Radio (NAV1) na Air France Airbus 380 3 afọ 6 ọnwa gara aga #443
Otu ihea ebe a ... n'eziokwu, PA A380 niile nwere nsogbu ahụ.
Eleghị anya, ọ bụrụ na enwere ụzọ dochie redio ahụ ma ọ bụ ihe ọ bụla, na nke si na Boeing ga-enye aka, mana echela na nke ahụ ga-ekwe omume. Echetere m, na FS2004 nke ahụ kwere omume.
Enweghi ike ịgbanwe Radio (NAV1) na Air France Airbus 380 3 afọ 6 ọnwa gara aga #444
Enwere m ike idozi ya. Niile ịchọrọ bụ A321 ndabara gị.
Gaa na A321,
chọọ na emeghe file.cfg,
Detuo ahịrị ndị a:
(naanị ndị nwere agba), agbachila Window01 ahụ, ọ nwere ike kpachie kọlụm A380 gị.
Gaa na A380 gị,
Faịlị Panel.cfg mepere,
chọọ ma dochie ụzọ niile dị na Redio.
Nwalere nkeji ole na ole a na-aga, ma mee ọmarịcha ọdịda.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: spilok, Gh0stRider203, geniousabhishe1
Enweghi ike ịgbanwe Radio (NAV1) na Air France Airbus 380 3 afọ 6 ọnwa gara aga #445
Ọ ga-abụrịrị na ị nwetaghị ihe edeturu ha zitere….
Redio na Airbus bụ atụmatụ nhọrọ. Ihe dị ka blinkers na BMW
Enweghi ike ịgbanwe Radio (NAV1) na Air France Airbus 380 3 afọ 6 ọnwa gara aga #446